Izimbadada Resorts Umshado: "Cishe Ephelele" Izixazululo
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Imishado Yezothando Izinyanga Zekhefu » Izimbadada Resorts Umshado: "Cishe Ephelele" Solutions
Izindaba zase-Antigua neBarbuda • Izindaba zeBahamas Breaking • Izindaba zeBarbados Breaking • Izindaba Ezintsha • Izindaba zeGrenada Breaking • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba zaseJamaica • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Izindawo zokuhlala • Imishado Yezothando Izinyanga Zekhefu • Izindaba zaseSanta Lucia • Ezokuvakasha • Iziphesheli Zokuvakasha | Izeluleko Zokuhamba • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba Ezihlukahlukene
Izimbadada Resorts Umshado: "Cishe Ephelele" Solutions
Izimbadada Resorts Wedding
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, kunento eyodwa ebihlala iyiqiniso kunanini ngaphambili - uthando alukaze lushintshe, futhi namaphupho emibhangqwana yokushada. Ngokusho kwe- inhlolovo yakamuva evela kuThe Knot, 80% yemibhangqwana ethembisene ngokuhlala ihlala isesikhathini ngeziqondiso zakamuva ze-CDC futhi icabanga ukuthi lokho kungazithinta kanjani izinhlelo zazo zomshado zesikhathi esizayo. Ngenxa yokuthi imibhangqwana ifuna izixazululo zokuhlehlisa ukuhlehlisa usuku lwayo olukhulu, izitayela zomshado ezincane okwamanje ziyakhula futhi zihlela indawo esondelene nayo yomshado weSandals Resorts kungaba yisixazululo esifanele sokuvumela izifungo ziqhubeke.
Imibhangqwana ifuna izixazululo ezingenazo izingcindezi, zesikhathi sangempela zokwenza ukuhlela umshado ngesikhathi sobhadane lungabi namakhanda ngangokunokwenzeka. Kungakho nje njengabaholi emishadweni yezothando nezokuya khona, amaSandals Resorts anikezela ngochungechunge lwezinketho zokusiza imibhangqwana iphuphe umkhosi wayo omuhle womshado.
Kwethulwa Umcimbi Womshado Oncomekayo Wokusakaza bukhoma Ngonyaka ka-2021
Selokhu kuqale lolu bhubhane, imibhangqwana kudingeke ukuthi ithathe izinqumo ezinzima, noma ngabe lokho bekuwukuhlehlisa umshado wabo omkhulu noma ukunciphisa ababekhona ukuhlangabezana nemihlahlandlela yakamuva yeCDC. Manje, abashadikazi nabakhwenyana akudingeki bakhethe phakathi kwalaba bobabili lapho bebhukha umshado wokuya kunoma iyiphi yezindawo ezingama-Sandals kanye neBeaches® Resorts eCaribbean. Yonke imibhangqwana ebhukha umshado oya kuyo noma i-ReTie the Knot® eqala ngoSepthemba 18, 15 kuya kuDisemba 2020, 31, ngezinhlelo zokushada ngo-2020 nango-2020, izothola Umcimbi Wokuhlanganyela Wokusakaza Okubukhoma Womshado, ngakho-ke imindeni nabangane - cishe - bangaba yingxenye yaleso sikhathi esikhethekile lapho abashadikazi bethi “Ngiyakwenza”.
Cishe Onke Amathuluzi Wokuhlela Umshado Womakoti Nabagcwabi Ukuphupha Usuku Lwabo Olukhulu Kusuka Ekhaya
Ama-360-degree Digital Tours: Cishe “hamba” ngokusebenzisa ezinye zezindawo zokungcebeleka ezinhle kakhulu ze-Luxury Included® eCaribbean. Akukaze kube lula ukuhlola indawo yokuvakasha nezindawo zayo ezinwabuzelayo, kuhlinzeke ukubukwa kwangaphakathi kwamasudi kanokusho amaSandals, amabhishi namachibi anwebekayo ukusetha isiteji somshado ophelele lapho uya khona kanye nokuqala komshado omuhle kakhulu.
Isipiliyoni Sokwakheka Komshado Ongokoqobo: “Hlangana” nomhleli womshado wezimbadada namabhishi ngenkathi uhanjiswa cishe uyiswa egumbini lokubukisa lomshado elenziwa ngezifiso futhi uhlole izinketho zemihlobiso engapheli etholakalayo yemikhosi nokwamukela, ukuthola ugqozi oluhle losuku olukhulu.
Ithuluzi Lokugcina Lomshado Wedijithali: Dlulisa amehlo eminikelweni yomshado kaSandals kusuka kuzo zonke iziqhingi nendawo enhle ongakhetha kuyo, ezinsizeni zezinwele nezimonyo zosuku lomshado langempela.
Isithombe Imikhosi Engokwezifiso Eziphelele enezinkombandlela ze-CDC engqondweni
Ngemikhombandlela emisha ye-CDC ebiza ukuhlangana okuncane okungadluli ku-50, izimbadada zizimisele ukuguqula umgubho wokuphila kwabashadikazi ube yinto enkulu kakhulu.
Izinyoni ezimbili zothando: Elope ukuya epharadesi futhi ugqozi ngomunye weSandals ' inspirations noma uphuphe usuku olukhulu kusukela ekuqaleni Izimbadada Imishado Ngokwezifiso. Akunandaba ukuthi imibhangqwana ikhetha ini, yonke imishado iphelele ngemihlobiso emihle kakhulu eyenziwe ngokwezifiso nayo yonke imishado yamaSandals - kusuka kuma-cocktails wesiginesha nasekuseni embhedeni nama-mimosa, kuya esithombeni somshado esingu-5 × 7 nokuningi.
I-Perfect Ten Minimony: Imibhangqwana ingamema abathandekayo abayisishiyagalombili ukuthi bajoyine iphathi njengoba benana izifungo kunoma iyiphi yezindawo ezibizayo zaseSandals zaseCaribbean. Shada endaweni ebukekayo, eyimfihlo yomcimbi womshado, kusuka ezindlini ezivulekile nezingaphezulu kwamanzi ukuya engadini enamakhasi amahle, ujabulele ukwamukela i-cocktail yehora elilodwa ngewayini elimnandi elikhazimulayo, uthole isaphulelo esingu-15% kuRed Lane® Isipiliyoni se-Spa somakoti nomkhwenyana nokunye okuningi. Futhi, ukubhuka amakamelo amahlanu okuhlala abantu kabili kunikeza imibhangqwana ithuba lokukhetha i- Izinsimbi & Amakhwela isithuthukisi - engeza inzuzo eyengeziwe ukuthola lezo zivakashi zebha ye-sangria zizoyithanda!
I-Microwsding emnandi kakhulu engu-50: Imibhangqwana efuna ukubopha ifindo nge-microwding esondelene ngaphansi kwezivakashi ezingama-50 ngemihlahlandlela yakamuva ye-CDC ingenza imikhosi yayo ibe ngeyakho ngokuthanda kwayo. Yonke imishado ebhukwe enamakamelo angama-20 okuhlala abantu ababili noma ngaphezulu iza nayo yonke imincintiswano yomshado eyimbadada yeSandals kanye nokukhethwa kwezithuthukisi ezintathu ze-Bells & Whistles, nokukhethwa kwephathi yokudla eyamukelekayo ukuqalisa imikhosi, i-5-Star Global Gourmet ™ lobster ukwamukela isidlo sakusihlwa, i-rum nomdlalo wobusuku, noma isikweletu esingu- $ 1,000 sibheke e-Island Routes Catamaran Cruise nokuningi.
Sequel Imikhosi: Ngisho nangemva komshado kanye ne-honeymoon, izimbadada zinikeza izikhathi ezikhethekile zokuthi imibhangqwana ibuye futhi izogubha. Kusuka ohlelweni oludumile lwe-Anniversary olunikeza ukuhlala okuncomekayo ebusuku kwemibhangqwana ebibhukhe ubusuku obungu-7 noma ngaphezulu eClub noma eButler suite ukugubha futhi nabangani nomndeni nge-ReTie the Knot® minimony yamahhala yeqembu lamakamelo ama-5 noma ngaphezulu.
Izimbadada ziqhayisa ngezinye zezindawo zemishado ezihluke kakhulu njengama-Over-the-Water Serenity Wedding Chapels ayo kanye nama-gazebos asezilwandle - avumela imikhosi esondelene, evulekile kanye nemikhosi imibhangqwana nabathandekayo bayohlala bekhumbula. Futhi, imibhangqwana ingabhuka i- I-WeddingMoon futhi baqale i-honeymoon yabo okwesibili abathi, "ngiyakwenza!", okwenza kube lula ukugubha impilo yothando kwelinye lamasudi ayimfihlo afunwa kakhulu eCaribbean.
Ubumfihlo yi-Luxury entsha
Izimbadada azigcini ngokunikeza ngokuhlala ngaphandle kokukhathazeka, kepha inkampani yasungulwa ngesisekelo sokwakha indawo enothando - enezindawo zokungcebeleka ezinwelayo emabhishi amakhulu - lapho imibhangqwana ingalindela ubumfihlo nokuthandana okukhulu kakhulu noma ngabe kusosukwini lwabo lomshado noma kulo lonke iholide labo langemva komshado.
Imibhangqwana ingashada ngokuzethemba okukhulu kumkhiqizo othembekile weSandals. Ngokuphepha kwezempilo nokuphepha kwawo wonke umuntu njengamanje, izindlela zokuhlanzeka ezithuthukisiwe ezibekiwe Izimbadada zePlatinum Protocol zokuhlanzeka izonikeza imibhangqwana ukuthula kwengqondo, ibaqinisekise njengoba ihlela usuku lwayo olukhulu.
Izimbadada zeSandals ziqinisekisa omakoti namalokazana anamuhla ukuthi izifungo kufanele ziqhubeke ngokunikeza izixazululo "ezicishe zifanele" zemibhangqwana yomshado eya khona. Ukuze ufunde kabanzi ngohlelo lomshado wezimbadada lapho uya khona nangomcimbi wokuncoma bukhoma womcimbi womshado otholakalayo ozoqala ngoSepthemba 15, sicela uvakashele https://www.sandals.com/weddings/. Kuyo yonke imigomo nemibandela, sicela uvakashele: https://www.sandals.com/disclaimers/wedding-terms-and-conditions/.